'' Distoorkii Ina Cigaal ''.
Thursday May 21, 2020 - 09:40:44 in Articles by Hadhwanaag News
Sanadkii 2000 , ayaa laggu dhawaaqay in bisha 5aad ee sanadka 2001 Somaliland lagga
qaban doono afti dadwayne oo dadku ugu codayn doono distoorka Somaliland , distoorkaas oo draft kiisa koobaad laggu ansixiyey shirwaynihii 3aad ee beelaha Somaliland 1997 , ka dibna kaabis , wax ka badalis iyo dhamaystirid ay ku sameeyeen labadda gole ee guurtidda iyo Baarlamaanku .
Ansixintaai markay dhamaatay , aisla sanadkaas 2001 loo dhaqaaqay furashadda axsaabta siyaasadeed oo ay ugu horeeyeen , Ucid , Udub iyo qaar kale , isla sanadkaas waxaa shirwayne laggu qabtay magaaladda Burco 2001 , waxaana shirkaa ka qayb galay 16 Suldaan iyo Cheif caaqil , waxaana saxeexay 17 , baaqasna waxaa hordhac looga dhigay arrimahan .
In Distoorka ina cigaal samaystay oo uu is leekaysiiyey , in xukuumaddu sharciga ku tumatay kuna xud-gudubtay , ugu dambayn waxaa lagga soo saaray go aan odhanaya .
1- In xukuumaddu joojiso nidaamka axsaabta kana noqoto xisbigga udub muddo 30 cisho gudaheedda .
2- In shirwayne beeleed la isugu yimaaddo .
3- In hadii xukuumaddu qodobadaas fulin waydo Golaha salaadiintu dadka isugu yeedho .
Arrintaas oo wadanka qalalaase gelisay waxay ku dhamaatay ugu damayn geeridii Cigaal , markii Cigaal dhintay 2002 ayaa dhamaan taageerayaashii baaqyadaasi distoorkii iyo nidaamkii dib ugu soo noqdeen .
Baaqaasina wuxuu ahaa mid aan laggu hagaajin maxkamadaha , goleyaasha iyo xukuumadda oo banaan ka fayla , waxaana watay siyaasiyiin caana oo la wada yaqaanay .
Hadaba waxaa xusid mudan , in waagaas 2000 ilaa maanta Distoorka la igu xukumaa yahay kii waagaas la ansixiyey oo aan hal qodobna lagga badalin .
Dhamaan dadkii Distoorkaa kasoo horjeeday na xukuumadda way soo mareen , qaarkoodna way ku jiraan , distoorkii waagaas ay diidanaayeena way inagu xukumeen , qaarkoodna hadeer inagu xukumaan , hadaba bal maxaa la diidanaa maxaase la badalay.
20 sanno ka dib 2000 , 2020 .
Waxaa jirta axsaab siyaasadeed oo sharciyeysan , goleyaal sharciyeysan iyo xukuumad sharciyeysan .
Baaqyadda ina soo gaadhayana sidda distoorku dhigayo looma gudbinin golaha wakiiladda si ay u noqdaan soo jeedin golaha la hor dhigay oo la midda ta ay soo gudbiyaan xildhibaanaddu , dacwad ahaana maxkamadda looguma gudbinin si dadka soo saarayaa ay uga dacwoodaan waxay ka cabanayaan , xukuumadda xafiisyadeedana looma gudbinin , axsaabta siyaasaddana sidoo kale midna lagguma hagaajinin , baaqyada qudhooda ayaana ah kuwo banaan ka fayla sidii kuwii 2000 oo aan distoorka iyo sharciga midna ku salaysnanayn , waxaanay u muuqdaan uun sidda kuwii waagaas ina soo maray kuwo cid gaari , si gaara ugu muraadsanayso